“Waxaan ku raaxeysan doonaa u ciyaarista kooxda Arsenal in ka badan Manchester United”…Henrikh Mkhitaryan – Gool FM
“Waxaan ku raaxeysan doonaa u ciyaarista kooxda Arsenal in ka badan Manchester United”…Henrikh Mkhitaryan
(Arsenal) 26 July 2018. Xidiga reer Armenia ee Henrikh Mkhitaryan ayaa yimid kooxda Arsenal bishii January ee lasoo dhaafay, wuxuuna sheegay in ka ciyaarista Gunners uu ku raaxeystay in ka badan Manchester United.
Ugu horeyn Henrikh Mkhitaryan ayaa wuxuu sharaxaad buuxda ka bixiyay sababta uu kaga soo dhaqaaqay kooxdiisii hore ee Manchester United bishii January ee lasoo dhaafay.
“Nolosha, waa inaad u diyaar garowdid wax walba, waxay ahayd wakhti adag oo hubaal ah, laakiin waxaan in badan isku dayay inaan ka gudbo, ma garanayo”.
“Malaha waxaa jiray waxyaabo qaldan, ama aysan ahayn sida aan doonayay, laakiin tani waa nolosha”.
“Inkastoo ay Arsenal mar walba ciyaarto kubada cagta ku saleysan qorsho weerar, laakiin kooxda Jose Mourinho waxay u ciyaareesay qaab ka duwan, cidna ma dhaleeceeayo, balse waa falsafad kale”.
“Waxaan dhihi karaa waxaan ku riyaaqayaa inaan halkan ku ciyaaro halkan in ka badan kooxda Manchester United, falsafada way ka duwan tahay, qaab ciyaareedkana waa ka duwan yahay, kooxda way ka duwan tahay, ma jiraan waxaan isbar-bardhig ku sameenayo”.
Jadwalka kulamada horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga ee xili ciyaareedka 2018-2019 oo lasoo saaray